यौन अरुचि किन ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← पाका दम्पतीलाई यौन शिक्षा
मेशिन रिडेबल राहदानी’bout नेपाली दूतावास यूएईको आव्हान →
हालै गरिएको एक अध्ययनअनुसार महिलाहरू यौन जीवनबाट चाँडै टाढिन्छन् । फलस्वरूप तिनलाई कैयन्पटक सेक्स थेरापीको पनि आवश्यकता देखिन्छ । यसको प्रभाव ३३ देखि ६७ प्रतिशत महिलामा अनुभव गरिएको छ । यो अरुचि महिलामा मात्र सीमित छैन । पुरुषहरू पनि यसको सिकार भएको पाइन्छ र यस मामिलामा महिलाहरूको प्रतिशत धेरै बढी भएकाले कामेच्छाको कमीलाई महिलाहरूसँग जोडेर बढी हेरिन्छ । यौनप्रतिको इच्छा कहिले र किन जागृत हुन्छ भन्ने प्रश्न जति सहज छ त्यसको उत्तर त्यत्तिकै कठिन छ ।
अधिकांश महिला यसलाई स्वीकारगर्न हिच्किचाउँछन् । वास्तवमा यस विषयमा शारीरिक कारण कम र मनोवैज्ञानिक कारण बढी जिम्मेवार हुन्छ । सेक्समा लामो समयदेखि अरुचि रहे कामेच्छामा कमी आउँछ । यद्यपि कामेच्छा कुनै प्रकारको डिसअर्डर नभएको कुरा भने बुझ्नु आवश्यक छ । महिला चाहे जुनसुकै उमेर वा वर्गका किन नहुन्, तिनमा एकतिहाई संख्या यस्तो हुन्छ जो सेक्सप्रति पहिलेदेखि नै रुचि नभएको कुरा बताउँछन् । सेक्युयल चाहना कम हुनुका पछाडि जस्तोसुकै कारण पनि हुनसक्छ ।
आपसी सम्बन्धमा देखिएको समस्या, मानसिक तनाव, शारीरिक परिवर्तन आदि यसको कारण हुन सक्छ । महिलाहरूमा मानसिक तनाव, शारीरिक परिवर्तन आदि त्यसका कारण हुन सक्छन् । महिलाहरूमा यो समस्या आमसमस्या हो तर यसको समाधान नभएको भने होइन । कुरा मात्र यौन जीवनको होइन, एकपटक यस प्रकारको अरुचि जाग्रत भए, त्यसको प्रभावमा जीवनका अरू पक्षमा पनि पर्छ र जीवनलाई पहिले जस्तै सहज रूपमा इन्जोय गर्न सकिँदैन ।
कारण के हुन सक्छ ?
सामाजिक परिवेशअनुरुप यौनसम्पर्क त टाढाको कुरा हो आपसी सम्बन्धका ’boutमा पनि महिला वर्गले खुल्ला रुपमा विचार विमर्श गर्न सकेका हुँदैनन् । प्रौढ अवस्थासम्म पुग्दा पनि महिलाले यौनका ’boutमा खुलेर कुरा गर्न सकेका हुँदैनन् । हिच्किचाहट कायम रहेको अवस्थामा पनि उनीहरूको कुरालाई उनीहरूको छविसँग जोडेर हेरिन्छ । यसकारण पनि महिलाहरू आफ्नो कामेच्छाप्रति उदासीन रहन सक्छन् ।
महिलाका लागि सेक्स उनको सम्बन्धसित जोडिएको हुन्छ । यौन उनीहरूका लागि सम्बन्ध सुमधुरताको आवश्यकता हो । यदि प्रेम महसुस भएन भने यौन त टाढाको कुरा उनीहरूलाई स्पर्श पनि स्वीकार्य हँुदैन । यदि बेडरुममा कुराकानी हुँदैन भने उनीहरूको मुड बन्न सक्दैन । बिना कुराकानी उनीहरूको यौन यात्रा सम्भव हँुदैन । एकाध दिन बाहेक यदि पुरुष हरेक दिन बिना प्रेम-अनुराग सीधा यौनका लागि तत्पर हुन्छन् भने उनीहरूको मन यौनबाट विमुख हुन्छ । ’cause महिलाका लागि प्रे मबिनाको यौन स्वीकार्य हुँदैन ।
डिप्रेसनसम्बन्धी औषधी खाँदा पनि यौन सक्रियता घट्ने सम्भावना हुन्छ । ब्लड प्रेसर कम गर्ने औषधीको सेवनले पनि यस्तै प्रभाव पार्छ । फायब्रायड्स वा थाइराइड डिसअर्डरमा पनि यस्तो हुन्छ ।
गर्भावस्था र ब्रेस्ट फिडिङका बेला हुने हार्मोनल परिवतनले पनि सेक्युअल डिजायरमा प्रभाव पार्छ । मेनोपाजपश्चात् पनि यौन सक्रियतामा कमी आउँछ ।
सन्तान जन्मिसकेपछि सबै कुरा सन्तान जन्मनुपूर्व जस्तो रहँदैन । थकान र तनाव त्यसको सबैभन्दा ठूलो कारण हुन्छ । कारण जेजस्ता भए पनि यदि पुरुष सही अर्थमा आफ्नी पि्रयतमालाई साथ दिन चाहन्छ भने यौन निस्त्रिmयताको कारण पत्ता लगाएर समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । सन्तान जन्माइसकेपछि अधिकांश स्थितिमा महिलाको यौन जीवनमा पूर्णविराम लाग्छ । मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तनले यौन चाहनामा धेरै प्रभाव पार्छ । महिलालाई यी सबैबाट सामान्य स्थितिमा ल्याउन पुरुषले धैर्यतापूवर् क साथ दिएर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
posted by : dambar prasad rimal source: saptahiknepali